राहत प्याकेज कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर : RajdhaniDaily.com
Home बिचार राहत प्याकेज कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर
कोरोना संक्रमणविरुद्ध गरिएको लकडाउनका कारण सिंगो देशमा सिर्जित दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा आर्थिक अभावलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि सरकारले राहत प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आर्थिक रूपमा घोषणा गरिएको यो प्याकेज कार्यक्रमले दैनिक आर्थिक समस्यामा परेका आमजनतालाई मनोवैज्ञानिक ढाडससमेत दिएको छ । एकातिर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी संक्रमणको अनिश्चित दायरा र अर्कोतिर बिनापूर्वतयारी सिंगो देश लकडाउन र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्नाले सिर्जित जटिल मनोविज्ञान दुवै समस्यारूपी एक सिक्काका दुईपाटाका बन्न गएको अवस्थामा घोषित सरकारी राहत प्याकेजको कार्यक्रमले यी दुवैको समाधान लिएर आएको छ । आफंैमा सीमाविहीन र समयावधिविहीन बनेर आएको कोरोना संक्रमण कसैको नियन्त्रणमा छैन । यस्तो महामारीको विशेषता बुझेर ‘फाइट द कोरोना, लाइक द कोरोना’जस्ता सापेक्ष समाधानमूलक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन जरुरी छ । सरकारले पहिलो चरणमा तत्कालका लागि राहतका कार्यक्रम लिएर आएको छ, यसमा जनताको साथ र समर्थन छ । यस्तो जटिल अवस्थामा घरमै बसेर गर्ने वा गर्न सकिने अल्पकालीन उत्पादनमूलक काम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
यसका साथै, सरकारले आफूले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम निर्माण र घोषणाभन्दा पनि चतुर र दृढ भएर यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु जरुरी छ । जनस्तरबाट माग आयो भनेर मात्र वा सरकारको विरोध नहोस् भनेर मात्र कार्यक्रमको निर्माण र घोषणा गरिनुहुँदैन । सरकारद्वारा घोषित राहत प्याकेजका कार्यक्रम जनजीविकासँग जोडिएका छन् । जनजीविकाको कुरा जनतन्त्र वा व्यवस्थासँग जोडिएका हुन्छन् । व्यवस्थाको सञ्चालक र अभिभावक सरकार हो भने जनता शासित वा सेवाग्राही हुन्छन् । तर, यो सरकार र जनताबीच शासन व्यवस्थाले नै खडा गरेका विभिन्न शासकीय, प्रशासकीय तथा व्यापारिक तथा व्यवस्थापनजस्ता व्यावहारिक तह रहेका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको सफलता र विफलतामा यिनीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले, पनि राहत प्याकेज कार्यान्वयनका स्टकहोल्डरका रूपमा यिनीहरू देखा पर्छन् । कस्ताखाले शासन व्यवस्था र संरचना छ, तदनुरूप कार्यान्वयन हुन सक्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । होइन भने सरकारी कार्यक्रम हावादारी हुन सक्छन् ।
हाल घोषणा गरिएका राहत प्याकेजका कार्यक्रम जनमुखी छन् । तिनले पीडित तथा तल्लो वर्गका जनताका लागि राहत दिने ल्याकत राख्छन् पनि । तर, के सरकारसँगै यो प्याकेज कार्यान्वयनका स्टक होल्डरका रूपमा रहेका राज्य तथा समाजका विभिन्न पदसोपान तहहरु यसका लागि तयार छन् ? सरकारले आदेश, नीति वा कार्यक्रम उल्लंघनका रूपमा लिने र प्रशासकीय हल खोज्ने र राज्य तथा सामाजिक पदसोपानमा रहेका तहले लादिएको निर्देशनका रूपमा बुझ्ने भयो भने प्याकेज कार्यान्वयनको सम्भावना देखिँदैन । व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुको मूल्य नबढाउने, बैंक तथा सहकारीले ऋण तथा किस्ता असुलीमा लचकता अपनाउने, घरमालिकहरूले डेराभाडा नलिने, विद्युत् शुल्कमा लचकता, विद्यालयले मासिक शुल्कमा मिनाहा गरिदिने, मजदुरहरूको मासिक तलब र सेवासुविधा सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीले उपलब्ध गराउने आदि दैनन्दिन जीविकासँग जोडिएका राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सामूहिकताको खाँचो देखापरेको छ । यसका लागि सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित यी सबै पक्षले प्राप्त गर्न सक्ने सेवासुविधाको पनि सार्वजनिक घोषणा र कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु जरुरी छ । तब मात्र घोषित राहत प्याकेजको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - May 26, 2020 0
कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्यो, सबैभन्दा धेरै इटलीमा
अन्तराष्ट्रिय Sushila Bishwokarma - March 17, 2020 0
न्यूयोर्क । कोरोना भइरसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै मृत्यु र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या इटलीमा रहेको...
Breaking News Sushila Bishwokarma - June 26, 2020 0
काठमाडौँ । नेपालमा थप ५९३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा...